बेंगलोर - विकिपीडिया
(बंगलोर बाट पठाईएको)
बंगलौर (शिफाको सहर)
बेंगलुरु (ಬೆಂಗಳೂರು) समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०)
८,४२५,९७० (3rd) (2011[update])
• ११,३७१ /कि.मी.२ (२९,४५१ /वर्ग मी.)
७४१ कि.मी² (२८६ वर्ग मील)
• ९२० m (३,०१८ ft)
Coordinates: 12°58′00″N 77°34′00″E﻿ / ﻿12.96667°N 77.56667°E﻿ / 12.96667; 77.56667
बंगलौर या बेंगलूरु (कन्नड: ಬೆಂಗಳೂರು; उच्चारण: ['beŋgəɭuːru]) भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी हो। बंगलौरको जनसंख्या लगभग ६१ लाख छ र यो भारतको पाचौं सबै भन्दा ठूलो सहर हो। यस सहरलाई भारतको सूचना प्रविधिको राजधानी भन्दछन्। यहाँ साफ्टवेयर तथा संगणक (कम्प्यूटर)सँग सम्बन्धित अनेकौ प्रतिष्ठान (कम्पनिहरू) स्थित छन्। १ नोभेम्बर २००६मा सहरको नाम आधिकारिक रूपबाट बदलेर बेंगलूरु गरिएको छ।
बंगलौर कर्नाटकको सबै भन्दा ठूलो सहर हो। यहाँमा कन्नड बोलिन्छ। धेरै मानिसहरू एक भन्दा धेरै भाषा बोल्दछन्। एक अनुमानको अनुसार बंगलौरमा ५१% भन्दा धेरै मानिसहरू भारतको विभिन्न भागबाट आएर बसेका छन्।
४.१ बसवांगुडी बुल टेम्पल
४.२ शिव मूर्ति
४.३ इस्कोन मन्दिर
४.४ टीपू पैलेस
४.५ वेनकटप्पा आर्ट गैलरी
४.६ बंगलूरू पैलेस
४.७ विधान सौधा
४.८ ल्या ल बाग
४.९ कब्बन पार्क
४.१० दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान
४.११ गान्धी भवन
४.१२ चौदियो मेमोरियल हल
४.१३ गवी गंगादरश्रवरा मन्दिर
९ बाह्य सुत्रहरू
पुराणहरूमा यस स्थानलाई कल्याणपुरी या कल्याण नगरको नामबाट जानिन्थ्यो। अंग्रेजहरूको आगमनको पश्चात नैं बंगलौरलाई आफ्नो यो अङ्ग्रेजी नाम प्राप्त भयो।
बेगुरमा पाईएको एक शिलालेखबाट यस्तो प्रतीत हुदछ कि यो जिल्ला 1004 ई० सम्म, गन्गा राजवंशको एक भाग थियो। यसलाई बेंगा-वलोरूको नामबाट जानिन्थ्यो, जसको अर्थ प्राचीन कन्नडमा "रखवालहरूको नगर" हुदछ। सन् १०१५बाट १११६सम्म तमिलनाडुको चोल शासकहरूले यहाँ राज गरे जसपछि यसको सत्ता होयसल राजवंशको हातमा गयो। यस्तो मानिन्छ कि आधुनिक बंगलौरको स्थापना सन १५३७मा विजयनगर साम्राज्यको समयमा भए थियो। विजयनगर साम्राज्यको पतन पछि बंगलौरको सत्ताको बागडोर धेरै पटक बदलियो। मराठा सेनापति शाहाजी भहरूसलेको अघिकारमा केही समयसम्म रहे पछि यसमा मुग़लहरूले राज गरे। त्यस पछि जब १६८९मा मुगल शासक औरंगजेवले यसलाई चिक्काराजा वोडयारलाई दिए त यो नगर मैसूर साम्राज्यको भाग भयो। कृष्णराजा वोडयारको देहान्त पछि मैसूरका सेनापति हैदर अलीले यसमा १७५९मा अधिकार गरे। यसपछि हैदर-अलीको छोरा टीपू सुल्तान, जसलाई मानिसहरू शेर-ए-मैसूरको नामले चिन्दछन,ले यहाँ १७९९सम्म राज गरे जसपछि यो अंग्रेजहरूको अघिकारमा गयो। यो राज्य १७९९मा चौथो मैसूर युद्धमा टीपूको मृत्यु पछि नैं अंग्रेजहरूको हात लाग्न सक्यो। मैसूरको शासकीय नियन्त्रण महाराजाको नैं हातमा छोड दिइएको, केवल छावनी क्षेत्र (कैंटोनमा ट) अंग्रेजहरूको अधीन रहयो। ब्रिटिश शासनकालमा यो नगर मद्रास प्रेसिडेंसीको अन्तर्गत थियो। मैसूरको राजधानी १८३१मा मैसूर सहरबाट बदलेर बंगलौर गरियो।
टेलीग्राफ तथा रेलको आगमनले नगरको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभायो। उन्नीसऔं सताब्दीमा बंगलौर एक द्विनगर (ट्विन सिटी) बन्यो -पेट र छावनी। पेटमा मुख्यतः कन्नड जनवास थियो जबकि छावनीको निवासीहरूमा तमिल प्रवासीहरूको बहुतायत थियो। १८९८मा प्लेगको चपेटमा आएपछी बंगलौरको जनसंख्या एकाएक कम भयो। १९०६मा यो देशको पहिलो यस्तो नगर बन्यो जहाँ जलविद्युत आपूर्तिको सुविधा थियो शिवानासमुद्रको जलविद्युत केन्द्र यसको स्रोत थियो।
१९९०को दशकमा सौम्योपकरण (सफ्टवेयर)को अचानक प्रगतिको कारण बंगलौर एकदम उन्नत भयो।
कर्नाटकको उच्च अदालत
१२.९७ डिग्री उत्तरी अक्छांश र ७७.५६ डिग्री पूर्वी देशांतरमा स्थित यस नगरको भूखण्ड मुख्यतः पठारी हो। यो मैसूरको पठारको लगभग बीचमा ९२० मीटरको औसत ऊचाईमा अवस्थित छ। बंगलौर जिल्लाहरूको उत्तर-पूर्वमा कोलार जिला (सुनको खानीहरूको लागि प्रसिद्घ), उत्तर-पश्चिममा तुमकुर जिला, दक्षिण-पश्चिममा मांड्य जिला, दक्षिणमा चामराजनगर जिला तथा दक्षिण-पूर्वमा तमिलनाडु राज्य हो।
एक अनुमानको अनुसार बंगलौरमा ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरू भारतको विभिन्न हिस्साहरूबाट आएर बसेका छन्। आफ्नो अनुकुल मौसमको कारण यसलाई भारतको उद्यान नगर पनि भन्दछन्। प्रकाशको पर्व दीपावली यहाँ धेरै धूमधामबाट मनाईन्छ। दशहरियो, जुन मैसूरको चिनारी चिह्न बनेको छ, पनि एकदम प्रसिद्ध छ। अन्य लोकप्रिय उत्सवहरूमा गणेश चतुर्थी, उगाडी, संक्रांति, ईद-उल-फितर, क्रिसमसको नाम लिन सकिन्छ। कन्नड चलचित्र उद्योगको केन्द्र बंगलौर, साल्याउन औसतन ८० कन्नड चलचित्र बनाउँछ। कन्नड चलचित्रहरूको लोकप्रियताले एक नयाँ जनभाषा बंगलौर-की-कन्नडलाई जन्म दिएको छ जुन अन्य भाषाहरूबाट प्रेरित छ र युवा संस्कृतिको समर्थक। व्यंजनहरूको विविधताबाट भरपूर यस नगरमा उत्तर भारतीय, दक्कनी, चीनी तथा पश्चिमी खान एकदम लोकप्रिय छन्।
क्रिकेट यहाँको सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो। बंगलौरले देशलाई एकदम उन्नत खेलाडी दिको छ, जसमा राहुल द्रविड, अनिल कुम्बलहरू, गुंडप्पा विश्वनाथ, प्रसन्ना, बी. एस. चन्द्रशेखर, वेंकटेश प्रसाद, जावागल श्रीनाथ आदिको नाम लिन सकिन्छ। बंगलौरमा धेरै क्लब पनि छन्, जस्तै - बंगलौर गोल्फ क्लब, बाउरिंग इंस्टीट्यूट, इक्सक्लुसिव बंगलौर क्लब आदि जसको पूर्व सदस्यहरूमा विंस्टन चर्चिल र मैसूर महाराजाको नाम शामिल छ।
ऐसा मानिन्छ कि जब कैंपे गौडाले १५३७मा बंगलौरको स्थापनाको त्यस समय उनले माटोको चिनाई वाला एक साना किल्लाको निर्माण गराए। साथै गवीपुरममा उनले गवी गङ्गाधरेश्वरा मन्दिर र बासवामा बसवांगुडी मन्दिरको स्थापना गरे। यस किलाको अवशेष अझै पनि मौजूद छन् जसको दुई शताब्दीहरू पछि हैदर अलीले पुनर्निर्माण कराए र टीपू सुल्तानले त्यसमा अरु सुधार कार्य गरे। यो स्थल आज पनि दर्शनीय छ। सहरको मध्य १८६४मा निर्मित कब्बन पार्क र संग्रहालय हेर्न योग्य छ। १९५८मा निर्मित सचिवालय, गान्धी जीको जीवनसँग सम्बन्धित गान्धी भवन, टीपू सुल्तानको सुमेर महल, बाउँसगुडी तथा हरे कृष्ण मन्दिर, ल्याल बाग, बंगलौर पैलेस साईं बाबाको आश्रम, नृत्यग्राम, बनेरघाट अभयारण्य केही यस्तो स्थल छन् जहाँ बंगलौरको यात्रा गर्न सबैले चाहन्छन्।
बसवांगुडी बुल टेम्पल[सम्पादन गर्ने]
यो मन्दिर भगवान शिवको वाहन नन्दी साढेलाई समर्पित छ। प्रत्येक दिन यस मन्दिरमा एकदम संख्यामा भक्तहरूको भीड देख्न सकिन्छ। यस मन्दिरमा बसेको साढेको प्रतिमा स्थापित छ। यो मूर्ति ४.५ मीटर अग्लो र ६ मीटर लामो छ।
शिव मूर्ति[सम्पादन गर्ने]
यो मूर्ति ६५ फीटर अग्लो छ। यस मूर्तिमा भगवान शिव पदमासनको अवस्थामा विराजमान छ। यस मूर्तिको पृष्ठभूमिमा कैलाश पर्वत, भगवान शिवको निवास स्थल तथा प्रवाहित हुने गंगा नदी छ।
इस्कोन मन्दिर[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: इस्कनको हरे कृष्ण मन्दिर
इस्कोन मन्दिर (द इंटरनेशलन सोसायटी फर कृष्णा कंसी) बंगलूरूको सुन्दर भवनहरू मध्ये एक हो। यस भवनमा धेरै आधुनिक सुविधाहरू जस्तै मल्टी-विजन सिनेमा थियेटर, कम्प्यूटर सहायता प्रस्तुतिकरण थियेटर एवं वैदिक पुस्तकालय र उपदेशात्मक पुस्तकालय छ। यस मन्दिरको सदस्यहरू तथा गैर-सदस्यहरूको लागि यहाँ बस्नको पनि एकदम राम्रो सुविधा उपलब्ध छ।
टीपू पैलेस[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: टीपू सुल्तानको सुमेर महल
टीपू पैलेस तथा किला बंगलूरूको प्रसिद्व पर्यटन स्थलहरू मध्येको हो। यस महलको वास्तुकला तथा बनावट मुगल जीवनशैलीलाई दर्शान्छ। यस बाहेक यो किला आफ्नो समयको इतिहासलाई पनि दर्शाउँछ। टीपू महलको निर्माणको आरंभ हैदर अलीले गराएका थिए। जबकि यस महललाई स्वयं टीपू सुल्तानले पूरा गरेको थियो।
वेनकटप्पा आर्ट गैलरी[सम्पादन गर्ने]
यो ठाँउ कला प्रेमीहरूको लागि बिल्कुल उचित छ। यस आर्ट गैलरीमा लगभग ६०० पेंटिग प्रदर्शित गरिएको छ। यो आर्ट गैलरी पुरा वर्ष खुली रहन्छ। यस बाहेक, यस गैलरीमा धेरै अन्य नाटकीय प्रदर्शनीको संग्रह हेर्न सकिन्छन्।
बंगलूरू पैलेस[सम्पादन गर्ने]
यस महलको निर्माण १८८७ ई.मा गराए गयो थियो। यो महल बंगलूको प्रमुख पर्यटन स्थलहरूमा भन्दा एक छ। यस महलको वास्तुकला तुदौर शैलीमा आधारित छ। यो महल बंगलूरू सहरको मध्यमा स्थित छ। यो महल लगभग ८०० एकडमा फैल्एको छ। यो महल इंगलैंडको वाइंडसर महलको तरिका दिखाई दे्दछ।
विधान सौधा[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: विधान सौध
यो ठाँउ बंगलूरूको प्रमुख पर्यटक स्थलहरूमा भन्दा एक छ। यसको निर्माण १९५४ ई.मा गरियो। यस भबनको वास्तुकला नियो-द्रविडियन शैलीमा आधारित छ। वर्तमान समयमा यो ठाँउ कर्नाटक राज्यको विधान सभाको रूपमा उपयोग गरिन्छ। यस बाहेक भबनको केही हिस्सा कर्नाटक सचिवालयको रूपमा पनि कार्य गर रहेको छ। विधान सौधाको शैलीमा नैं अर्को भबनको भबनको निर्माण गरिएको छ, जसको नाम ’विकास सौधा’ राखिएको छ।
ल्या ल बाग[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: लाल बाग
लाल बागको रात्रि दृश्य
वर्तमान समयमा यस बागलाई ल्या ल बाग वनस्पति बगीचाको नामबाट जानिन्छ। यो बाग भारतको सबै भन्दा सुन्दर वनस्पतिक बगीचहरू मध्ये एक हो। अठारहऔं शताब्दीमा हैदर अली र टीपू सुल्तानले यसको निर्माण करवाएकोथियो। यस बगैचाको भित्र एक आकर्षक पोखरी छ। यो पोखरी १.५ वर्ग किलोमीटरमा फैलीएको छ। यो झीलको नजारा एक छोटेबाट द्वीपको तरिका प्रतीत हो्दछ। जस कारण यो ठाँउ एक राम्रा पर्यटन स्थलको रूपमा पनि जानिन्छ। खुल्ने समय- बिहान ९ बजेबाट साझ ६ सम्म। शुल्क - १२ वर्ष भन्दा अधिक उमेरको मानिसहरूको लागि दुई रूपैया।
कब्बन पार्क[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: कब्बन पार्क र संग्रहालय
कई एकड क्षेत्रमा फैले लन, टाढासम्म फैली हरियाली, सैंकडहरू वर्ष पुराना रुख, सुंदर झीलें, कमलको पोखरी, गुलाबहरूको क्यारियाउँ, दुर्लभ समशीतोष्ण र शीतोष्ण पौधे, सजावटी फूल पर्यटकहरूको आफ्नो ओर आकर्षित गर्दछन्। यहाँ प्रकृति मनुष्य सहित साक्षात्कार गर्छ। यो स्थान बंगलौरको सुंदरतम स्थानहरू मध्ये हो जसलाई ल्या ल बाग बटनिकल गार्डन, या ल्या ल बाग वनस्पति उद्यान भन्दछन्। यो २४० एकड क्षेत्रमा फैलिएको छ। १७६०मा यसको सिलान्यास हैदर अलीले गरे र टीपू सुल्तानले यसको विकास गरे।
दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान[सम्पादन गर्ने]
यो दरगाह सूफी सन्त तवक्कल मस्तानको छ। यस दरगाहमा मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम दोनहरू नैं श्रद्धालु आउँछन्।
गान्धी भवन[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: गान्धी भवन
गान्धी भवन कुमार कुरूपा मार्गमा स्थित छ। यो भवन महात्मा गान्धीको जीवनको सम्झनामा बनाईएको हो। यस भवनमा गान्धी जीको बाल्यकालबाट लिएर उनको जीवनको अन्तिम दिनहरूको चित्रहरूद्वारा दर्शाया गएको छ। यस बाहेक यहाँ स्वयं गान्धी जी द्वारा लेखिएका चिठ्ठिहरूको प्रतिकृतिको संग्रह, उनको खडाऊ, पानी पिउँनेको लागि माटोको बर्तन आदि स्थित छ। यो भवन बिहान १०.३० बजेबाट साझको ५ बजेसम्म खुला रह्दछ।
चौदियो मेमोरियल हल[सम्पादन गर्ने]
यस हलको निर्माण वायलिनको आकारमा गरिएको छ। कर्नाटकको प्रसिद्ध सांरगी आचार्य टी.चौदियोको मृत्यु पछि यस ठाउको नाम उनको नाममा राखाइयो। विभिन्न उद्देश्यहरूबाट बने यस वातानुकूलित हलमा विशेष रूपबाट परम्परागत कार्यक्रमहरूको आयोजन गरिन्छ। यो ठाँउ गायत्री देवी पार्क एक्सटेंशनमा स्थित छ। यस्तो मानिन्छ कि यो भवन पुरा विश्वमा संगीत वाद्यको आकारमा बनयो पहिलो भवन हो।
गवी गंगादरश्रवरा मन्दिर[सम्पादन गर्ने]
यो मन्दिर बसवनगुडीको छेउमा स्थित छ। यो मन्दिर आफ्नो वास्तुकलाको लागि पनि विशेष रूपबाट जानिन्छ। यो मन्दिर बंगलूरूको पुरानो मन्दिरहरू मध्ये एक हो। यस मन्दिरको निर्माण केम्पोगोडाले गराए थियो। यो मन्दिर भगवान शिव र माता पार्वतीलाई समर्पित छ। यस मन्दिरमा एक प्राकृतिक गुफा हो। मकर सक्रांतिको दिन एकदम संख्यामा भक्तगण यहाँ एकत्रित हो्दछन्। यो मन्दिर बिहान ७.३० बजे खुल्दछ र दिनको १२ बजेसम्म खुला रह्दछ। यस बाहेक साझ ५ बजेदेखी राती ८.३० बजेसम्म खुला रह्दछ।
बंगलौर विमानक्शःएत्र सबै भन्दा नजदीकी एयरपोर्ट बंगलौर सेंट्रल रेल स्टेशनबाट करीब ३० किलोमी.को दुरीमा स्थित छ। धेरै प्रमुख सहरहरू जस्तै कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, चैन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोच्ची, मंगलूर, पुणे र तिरूवंतपुरमबाट यहाँको लागि नियमित रूपबाट उडान हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि यसै एयरपोर्टबाट निकल्दछन्।
बंगलुरूमा दुई प्रमुख रेलवे स्टेशन हो। यो स्टेशन भारतको धेरै प्रमुख सहरहरूबाट जोडिएको छ। देशको धेरै सहरहरूबाट नियमित रूपबाट एक्सप्रेस रेल बंगलूरूको लागि चलल्छ।
बंगलूरूमा एकदम संख्यामा बस टर्मिनल हो। जुन कि रेलवे स्टेशनको नजीकै नैं छ।
बंगलूरूमा किनमेलको आफ्नो नैं एक अलग मजा छ। यहाँ तपाईंलाई कांचीपुरम सिल्क या सावोरस्की क्रिस्टल सजिलो संग सक्दछ। बंगलूरू विशेष रूपबाट मलहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ स्थित मल भारतको केही सुन्दर र ठूलो मल मध्ये एक हो। कमर्शियल स्ट्रीट बंगलूरूबाट सबै भन्दा व्यस्त र भीड-भाड वाला किनमेलको ठाउहरू मध्ये हो। यहाँ तपाईंलाई जुत्ता, ज्वैलरी, स्टेशनरी, ट्रैवल किरा र स्पोट्स वस्तुहरू सजिलो संग पाईन्छ। ब्रिटिश कालको समयमाको दक्षिण परेडलाई आज एम.जी.रोडको नामबाट जानिन्छ। यहाँ तपाईंलाई किनमेलको लागि इलेक्ट्रनिक उपकरण, किताबहरू र मैगजीन, सिल्क साडी, कपडे, प्राचीन र फोटोग्राफीसंग जोडिएका विशेष चीजहरू पाईन सक्छ। एम.जी.रोडको एकदम नजीक नैं ब्रिगेड रोड छ यो ठाँउ इलेक्ट्र निक उपकरण जस्तै टेलीभिजन, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, कम्प्यूटर र वाशिंग मिसिन आदिको लागि प्रसिद्व छ।
यस बाहेक तपाईं सरकारी बजारमा पनि किनमेलको लागि जान सक्नु हुन्छ। यहाँ तपाईंलाई पितलको भाडा, लकडीको फर्नीचर, प्राचीन आभूषण, परम्परागत वस्त्र, साडी, सजानेको समान आदि सजिलो संग पाईन्छ। तपाईं खरीदारीको लागि मैजस्टिक क्षेत्रमा पनि सक्नु हुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो किनमेलको जानिछ। यस बजारलाई हग-कग मार्केट, बुर्मा बजारको नामबाट पनि जानिन्छ। बंगलूरूमा धेरै अन्य बजार पनि छन जस्तै रूस्सल मार्केट यहाँ तपाईंलाई ककरी र घरसंग जोडिएका धेरै चीजहरू पाईन्छ। यसको अतिरिक्त चिकपेट बजार विशेष रूपबाट सिल्क साडी, सुन तथा चादीको गहनहरूको लागि एकदम प्रसिद्ध छ। यातायात[सम्पादन गर्ने]
बंगलौरको एच.ए.एल. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको तेस्रो व्यस्ततम एयरपोर्ट हो। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उङानहरूमा प्रयुक्त यो हवाईपट्टी, एशिया, मध्य-पूर्व तथा यूरोपको लागि सेवाहरू दिदछ। ढाँचा:बंगलोरको दर्शनीय स्थल ढाँचा:भारतीय मेट्रोपलिटन सहर ढाँचा:भारतको मिलियन+ नगर
विश्वको ठूलो सहर
बंगलौरको सैर (जागरण यात्रा)
↑ The total area of Greater Bangalore has been mentioned in the Karnataka budget of 2007-08 as 741 km². "Finance Budget for 2007-08" (PDF) ढाँचा:भारतको राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशको राजधानी
"http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बेंगलोर&oldid=336013" बाट निकालिएको	श्रेणीहरु: Articles containing potentially dated statements from 2011Articles with invalid date parameter in templateAll articles containing potentially dated statementsभारतकर्नाटकभारतको सर्वाधिक जनसंख्या भएका सहरहरूसहर	नेविगेशन मेनू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०६:४६, ३ मे २०१३ मा परिवर्तन गरिएको थियो।